दशै र तिहारको मुखमा भाडा बृद्दीको उपहार, यातायात व्यवसायीमा बहार – Mission Khabar
दशै र तिहारको मुखमा भाडा बृद्दीको उपहार, यातायात व्यवसायीमा बहार
मिसन खबर ६ आश्विन २०७५, शनिबार १७:२१
काठमाडौं । दशैंको अग्रिम टिकट खुल्नेसयमय अर्थात दशैको सम्मुखमा आएर सार्वजनिक यातायातको भाडा बृद्धि गरिएको छ । यातायात व्यवसायीहरूले दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ नै रोकेपछि सरकार १० प्रतिशत भाडा बढाउन बाध्य भएको हो ।
पटक पटक बढेको इन्धन मूल्यका आधारमा भाडा नबढाइएको भन्दै व्यवसायीले ५ गतेबाट खोल्ने भनेको अग्रिम टिकट बुकिङ रोकेका थिए । व्यवसायीको अडानले यात्रुलाई समस्या हुने भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय हालै भएको इन्धनको मूल्यबृद्धिलाई मुख्य आधार मानेर भाडादर १० प्रतिशत बढाउन सहमत भएको छ । आइतबार बाटै नयाँ भाडादर कायम गर्ने तयारी यातायात व्यवस्था विभागले अघि बढाएको छ ।
समय सापेक्ष भाडादर कायम गर्न भन्दै दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी समिति गठन गर्ने र मंसिर २९ सम्म भाडा समायोजन गर्ने सहमति पनि सरकार र यातायात व्यवसायीबीच जुटेको छ । यातायात व्यवसायी संघ तथा समितिहरुको रोक्का रहेको बैंक खाताबाट समितिको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने खर्च भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई भनिएको छ । सिण्डिकेट कायम गरेको भन्दै सरकारले २४५ समितिको बैंक खाता रोक्का गरेको थियो ।
दशै, तिहार र छठमा हजारौँ सर्वसाधारण काठमाडौंबाट जन्मथलो र चाडपर्व मनाएर पुनः काठमार्डौ नै फर्किने गर्छन । यसमा यात्रुलाई १० प्रतिशत भाडा बृद्दिको मार कति पर्छ ? लेखाजोखा गर्ने जिम्मा सरकारलाई नै । जनतालाई राहत र सहुलियत दिन बढी ध्यान दिने की व्यवसयाीलाई बढी लाभ दिलाउन ? सरकार यसमा गम्भिर बन्नुपर्छ ।